योग र शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीबीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ? – Health Post Nepal
योग र शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीबीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ?
२०७७ असार ७ गते ६:५०
योग प्राचिन समयदेखि नै शरीरलाई चुस्त दुरुस्त राख्न प्रयोग गरिँदै आएको छ। योगले मानव प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाइ राख्छ। यो कुरामा शायद कसैको पनि दुई मत नहोला।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि योग विज्ञान र अनुसन्धानमा आधारित छ, भन्ने कुरालाई मान्यता दिइसकेको छ फलस्वरुप जुन २१ लाई इन्टरनेशनल योगा डे भनेर सन् २०१५ देखि मनाउन थालिएको छ ।
अब कुरो नघुमाइकन योग र मानव प्रतिरक्षा प्रणाली बीचमा के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा गरौं।
हामी लामो समयदेखि कोभिड १९ का कारणले लकडाउनमा छौं। यस संकटको समयमा हामी विभिन्न शारिरीक ,मानसिक र संवेगात्मक तनावहरू उत्पन्न भैरेहेका छन्।
तनावले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलार्य असर गर्छ। शरीरमा रहेका सुक्ष्म कोषहरूलाई गडबड गरी प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पनि कमजोर बनाउँछ तसर्थ यस्तो समयमा हाम्रो सम्पूर्ण शरीर, मन र भावनाहरूलाई सन्तुलनमा राख्न अत्यन्त जरुरी छ ताकि हामी यस महामारीसँग लडन सकौँ।
यसका लागि हामीले अपनाउने उपाय भनेको जीवनशैली, खानपान र योग नै उत्तम उपाय हो।
योगले तनावलाई बढाउने विभिन्न खालका हर्मोनहरू कम गर्छ, फोक्सोको क्षमता बढाउँछ, रगतमा अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ र लिम्फेटिक प्रणालीलाई सक्रिय बनाई शरीरमा रहेका विभिन्न विषाक्त पदार्थहरूलाई बाहिर निकाली शरीरलाई सफा बनाउँछ। यसले गर्दा हाम्रो शरीर, मस्तिस्क र मन सफा एवं तन्दुरुस्त बन्न जान्छ अनि प्रतिरक्षा प्रणालीमा सकारात्मक असर परी बलियो बन्छ।
लकडाउनका बेला घरमै कस्तो खालका योगासनहरु गर्न सकिन्छ?
अर्ध मत्स्येन्द्रासन : शरीरको मुख्य भाग मेरुदण्ड हो यो भाग बलियो भयो भने सम्पूर्ण शरीर बलियो हुन्छ । यो ट्वीस्टीङ आसन समूहमा पर्छ। यसले मेरुदण्ड बटार्ने मात्र हैन शरीरको आन्तरिक अंगहरूलाई सक्रिय बनाई प्रतिरक्षा प्रणालीमा सकारात्मक असर पार्दछ।
यस्ता शरीर बटारिने खालका आसनहरूको सिद्धान्त के हो भने जब मेरुदण्ड बटारिन्छ यसले हाम्रो पाचन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पेटलाई खुम्च्याउँछ, बटार्छ र पाचन रसहरू निस्कासन गराउँछ यदि पाचनप्रणाली गडबड छ भने ठीक राख्न सहयोग गर्छन। पाचन प्रणलीमा गडबड भयो भने शरीरमा बिषाक्त पदार्थहरु थुप्रिन जान्छन र हामी रोगी हुन्छौँ।
मत्स्य आसन : प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने एक महत्वर्ण आसन भनेको मत्स्य आसन पनि हो । यो आसनले त्यसो त सम्पूर्ण शरीरलाई नै फाइदा गर्छ तर विशेष गरी शरीरको मध्य भाग घाँटी देखि लिएर छातीको वरिपरिको सम्पूर्ण अंगहरुलाई सक्रिय तथा बलियो बनाउँछ। फोक्सो, कलेजो, मुटु जस्ता शरीरका मध्य भागमा रहेका अंगहरूलाई बलियो बनाई प्रतिरक्षा प्रणालीमा सकारात्मक असर पार्दछ ।
उत्तानासन : अगाडी झुकेर गर्ने आसनहरुमध्येमा प्रभावकारी आसन उत्तानासन हो। यसले टाउको र मस्तिस्कम रक्त प्रवाह बढाउँछ। खुट्टा देखि लिएर सम्पूर्ण शरीर तन्काउँछ।
मस्तिस्कमा रक्त प्रवाह र अक्सिजनको प्रवाह बढाउने भएकाले यसले तनाव कम गर्छ। तनाव कम भयो भने पक्कै पनि प्रतिरक्षा प्रणालीमा सकारात्मक असर पर्छ।
विपरित करनी : यो पनि तनाव व्यवस्थापनका लागि अति नै महत्वपूर्ण आसन हो । यो शरीरलाई आराम दिनेखालको आसन हो। यसले ढाडमा रहेको तनावलाई बाहिर निकाल्छ ,लिम्फेटिक प्रणालीलाई सक्रिय बनाउँछ ,शरीरको माथिल्लो भागमा रक्त प्रवाह बढाउँछ । नसाप्रणालीलाई आराम दिन्छ।
नौकासन: नौकासनले विशेषगरी मेरुदण्ड र पेटका साथै यसमा रहेका आन्तरिक अंगहरुलाई बलियो र सक्रिय बनाउँछ। पेट सफा भयो भने शरीर सफा हुन्छ शरीर सफा भयो भने मन र मस्तिस्क पनि सफा हुन्छ । शरीर र मस्तिस्क सफा भयो भने प्रतिरक्षा प्रणाली त्यसै पनि बलियो हुन्छ। यो आसनले तपाइँको पेटको बासो पगाली पेट घटाउन पनि मददुत गर्छ। शरीर स्वस्थ र आर्कषक बनाउँछ।
यी माथि दिइएका आसनहरु गर्नुभयो भने पक्कै पनि शरीरमा सकारात्मक असर पर्नेछ अनि प्रतिरक्षा प्रणाली पनि बलियो हुनेछ। योग गरौं स्वस्थ रहौं।
(लेखक याेग प्रशिक्षक हुन्)